यो कुरा पढौं अनि मात्र अघि बढौं
प्रेमराज सिलवाल नेपालको शासन प्रणाली स्थिर नहुनुमा निर्वाचन प्रणालीको पनि दोष छ । जसरी खानेपानीको उत्तम विकल्प अझ सफा पानी हुन सक्छ त्यसरी नै लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र, विकसित लोकतन्त्र, जनतामा आधारित लोकतन्त्र, सर्वस्वीकार्य लोकतन्त्र, जनताको उन्नतिको साधक लोकतन्त्र हो । सन् १९४९ मा जनवादी व्यवस्था ल्याएको चीनले पनि सन् १९७५ पछि स्थानीय तहमा निर्वाचनबाटै सरकार गठन गर्न थालेको हो । त्यहाँको संसद् नेसनल पिपुल्स… विस्तृत समाचार
डा. राजेश अहिराज संविधान संशोधनको विषय चासोको केन्द्रमा रहेका बेला मधेसी जनता किंकर्तव्यविमूढ छन् । समानता र समन्यायका निम्ति २००८ सालदेखि संघर्षरत र अधिकांश अवस्थामा मतदाताभन्दा माथिको दर्जा पाउन नसकेका मधेसी आफ्नो अंश र वंशका निम्ति चिन्तित हुन थालेका छन् । मधेसी मतको दुरुपयोग हुँदै आएको सर्वविदित्तै छ । मधेसबाट मत लिने तर अधिकार नदिने दलको दर्जामा स्वयं मधेसी मोर्चा पनि उभिन पुगेको छ ।… विस्तृत समाचार
रामदेवले जति पनि हेरेनन् राष्ट्रलाई
सुशील पन्त गत शुक्रबार संसद्मा बोल्दै नेकपा माले महासचिव सिपी मैनालीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कतै ‘बहुला कुकुर’ ले टोकेको त होइन भनी प्रश्न गरे । कांग्रेस सांसदले तत्कालै नियमापत्ति जनाएपछि सभामुखले सो शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइन् । कुनै बेला प्रचण्डभन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टको परिचय बनाएका सिपीले कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीलाई कुकुरले टोकेको हो ? भनेर योजनाबद्ध ढंगले सोधेका हुन् कि जीब्रो चिप्लिएर निस्किएको हो, आफैं जानुन् । तर,… विस्तृत समाचार
किन नलाउने एमालेलाई यस्तो आरोप ?
सीताराम भट्टराई एमालेले अब के गर्ला ? चार दिनअघि सम्मको यो प्रश्नले जवाफ पाइसकेको छ । सदनबाट सडकको यात्रा शुरु गरिसकेपछि संघर्षको मोर्चालाई नै देशको दोस्रो ठूलो दलले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ । तर, फेरि पनि सवाल के छ भने के एमालेले सुझबुझसाथ यो कठिन मार्ग रोजेको हो ? या, केपी शर्मा ओलीको ‘राष्ट्रवादी रोमान्सवाद’ हाबी हुँदाको परिणतिका रूपमा यो देखा परेको हो ? जे… विस्तृत समाचार
हाँगो ताछेर के हुन्छ र हजुर !
डा. नम्रता पाण्डे प्रेमको अभाव, पारिवारिक तनाव, पुरातनवादी सोच, आफ्नो कब्जामा राख्न खोज्नु, आफ्नोअनुकूल बनाउन खोज्नु, एकअर्काको मनोवैज्ञानिक स्वभावको कदर नगर्नु, रूखो बोली, हेपाह प्रवृत्ति, घृणा आदि सबै हिंसाका स्वरूप हुन् । यस्ता स्वभावको प्रयोग गरी महिलाले पुरुष या पुरुषले महिलाप्रति गरिने व्यवहार नै हिंसा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै पारित गरेको १९९३को घोषणापत्रमा महिला भएकै कारणले गरिने सबैखाले हिंस्रक व्यवहार महिला हिंसाका रूप हुन्,… विस्तृत समाचार
काठमाडौंंलाई हर्जाना तिराइनुपर्छ
डा. अच्युत अर्याल ००७ सालपछि काठमाडौंंले काँठमाथि अन्याय सुरु गरेको हो । राजनीतिक दलले तिनका कार्यक्रम गर्न र आफू लुक्न काँठलाई प्रयोग गरे, अनि आफ्नो हातमा सत्ता आएपछि उल्टै दोहन गरे । पटक–पटक सत्तामा पुगेर काठमाडौंंकै पक्षमा काम गरे । निर्णय गरे । काँठलाई बेवास्ता गरे । काँठको पानी अन्यायपूर्वक काठमाडौंंले प्रयोग गरेको छ । यसको हर्जाना जरुरी छ । काठमाडौंंको काँठ क्षेत्र भौगोलिक रूपमा… विस्तृत समाचार
सजिलै फेरिन्न– नेचर, कल्चर, सिग्नेचर
संकेत कोइराला एउटा गिद्धको बच्चाले आफ्नो बालाई भनेछ– ‘आज मलाई मान्छेको मासु खान मन लागेको छ ।’ गिद्ध भुर्रर्र उडेर गयो र बेलुका मासु लिएर आयो । बच्चाले सोध्यो– ‘यो के को मासु हो ?’ बाउ गिद्धले उत्तर दियो– ‘सुँगुरको ।’ बच्चाले बालहठ छाडेन । गिद्ध फेरि उड्यो । यसपटक गाईको मासु ल्याएर फकाउने प्रयास ग¥यो । अहँ, बच्चा चुप लागेन । उसले जुक्ति लगायो… विस्तृत समाचार
वैकुण्ठ ढकाल नियमित किनमेल गर्ने पसलमै सहकर्मीले एक प्याकेट दूध किने । फ्रिजबाट निकालेको प्याकेट निकै चिसो रहेछ । सहकर्मीले भने, ‘कति चिसो ।’ साहुनीले बडा रसिक जवाफ फर्काइन्, ‘भर्खरै नुहाएर आएको अनि चिसो हुँदैन त ?’ महिनावारी तिर्ने भएकाले पैसा निकाल्नुपरेन । मुर्छा परेर हाँस्दै अघि लागे, मैले पछ्याएँ । प्याकेटको दूध फ्रिजमा हालेर चिसो भएको हो । साहुनीले नुहाएर के चिसो हुन्थ्यो र… विस्तृत समाचार
मनलाग्दी त गर्न भएन नि !
लेखनाथ भण्डारी कञ्चन शर्मा रेग्मीसँग लिइएको अन्तर्वार्तामा वार्ताकार सुमन खरेल, सम्पादक र मिडिया (कान्तिपुर टेलिभिजन) को सतप्रतिशत गल्ती छ । यसमा गरिएका वार्ता वा प्रश्नको एकोहोरो प्रस्तुति छ । तथ्य पुष्टि गर्ने प्रयास छैन । पत्रकारिता पेशा सजिलो छैन । यो सामान्य वार्ता वा भलाकुसारीजस्तो पनि होइन । पत्रकारिता प्रशंसा र निन्दा त हुँदै होइन । भनिएका वा मानिएका बिजनेस हाउसमा आरामले बसेर फोन वा… विस्तृत समाचार
बतासिएर बोल्दाका बर्बादी
रमण पनेरु ‘नखुलेको आकाश खुलेर आयो ऊ शायद यो बाटो भुलेर आयो झ¥यो त के भो जाही र जुही त्यो पलास मनमा फुलेर आयो’ बिबिसीमा लामो समय काम गरेका सुमन खरेलको कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम ‘सुमन सँग’मा कञ्चन रेग्मीले यी पंक्ति सुनाउँदा एकदमै भावुक बनेको थिएँ । उनले पति र छोरा इञ्जिनियर हुँदाहुँदै आफूलाई हेलाँ गरेको र सात वर्षसम्म पीडामा बाँचेको, चिताको आगो तापेर हिउँद… विस्तृत समाचार